MACLUUMAADKA TARANKA EEYAHA EE PRESA CANARIO IYO SAWIRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyaha ee Presa Canario iyo Sawiro
Tobatacaya de Rey Gladiador, waa gabar 12-bilood jir ah Dogo Canario dhedig ah iyo Junior Champion-ka Poland, sawir waxaa iska leh Rey Gladiador
Liiska eeyaha eyda 'Presa Canario Mix'
Eyga Presa Canario
Presa Canario wuxuu leeyahay madax xoog badan, oo laba jibbaaran kaas oo kudhowaad balaaran sida uu yahay. Afku wuu ballaadhan yahay. Laabta ayaa qoto dheer oo ballaadhan. Koobka xoogaa ayaa kor loo qaaday. Noocani wuxuu leeyahay maqaar qaro weyn, lafo cufan, murqo xoog leh iyo madax weyn oo leh daan weyn. Dhegaha badanaa waa la gooyaa. Midabada waxaa ka mid ah fawn iyo noocyo kala duwan oo calaamado cad ah mararka qaarkood ayaa la arkaa.
Presa waa eey decile ah, kalgacal leh. Iyagu waa ilaaliyeyaal qoys oo weyn waxayna ku abtirsadaan inay noqdaan wehel qoys iyo sidoo kale ilaaliyeyaal. Iyagu waa aamin maayaan shisheeyaha, laakiinse waa inay aqbalaan shisheeyaha, Waa inay feejignaadaan oo diyaar u ahaadaan inay difaacaan milkiilaha ama hantida haddii loo baahdo. Guud ahaan waa nooc xasilloon laakiin wuxuu leeyahay jilif aad u cabsi badan. Noocani wuxuu u baahan yahay milkiile fahmaya dabeecadda alfa geedaha. Ma jiro qof qoyska ka mid ah oo aan ku raaxeysan karin eeyga. Canaries samaynta fiican eeyaha ilaaliya . Kaliya muuqaalkoodu waa carqalad, iyada oo aan lagu xusin awoodda ay u leeyihiin inay iska horkeenaan midna ku soo xadgudbay . Sida dhammaan eyda noocyada masuulka ah ee hore u dhexgalka bulshada iyo tababarka u hoggaansamida waa waajib. Mararka qaarkood waxaad ku arki doontaa xoogaa gardarro eey ah Presa Canario, laakiin is dhexgalka saxda ah iyo tababarka tani waa mid ka reeban oo aan ahayn qaanuunka. Presa Canario wuxuu ku tartamaa oo ku fiicnaadaa isku xirnaan badan, adeecid, eeyaha birta, kacsanaanta, quusitaanka dekedda, schutzhund iyo tijaabooyinka kale ee shaqada. Kuwo badan ayaa lala koriyaa eeyo kale, bisado, shimbiro, iyo waxa gurguurta. Milkiilayaashu waa inay eeyaha u qaataan xirmo xirmo maalinle ah si loogu qanciyo dareenkooda tahriib. Eeygu waa inuusan ku hor socon bini'aadamka hogaaminaya hogaanka, maadaama hogaamiyaha baakadka uu ugu horeeyo. Eeygu waa inuu ku ag socdaa bini'aadanka ama gadaashiisa. Ujeedada tababarka eeygan ayaa ah gaaro heerka hogaamiyaha xirmada . Waa dareen dabiici ah eey ey leedahay ku dalbo xirmadooda . Markii aan dadku waxay la nool yihiin eeyaha , Waxaan noqonay xirmadooda. Xirmada oo dhan waxay lashaqeysaa hal hogaamiye. Khadadka si cad ayaa loo qeexay xeerarna waa la dejiyay. Sababtoo ah eeygu wuxuu u gudbiyaa xanaaqiisa ciil iyo aakhirka qaniinyada, aadanaha kale oo dhan WAA INAY ka sarreeyaan nidaamka eyga. Bini'aadamku waa inuu noqdaa kuwa go'aaminaya, eeyaha maahan. Taasi waa sida kaliya ee xiriirka aad la leedahay eygaagu u noqon karto guul dhammaystiran.
Miisaanka: 80 - 100 rodol iyo wixii ka sareeya (36 - 45 kg)
Dhererka: 21 - 25 inji (55 - 65 cm)
Presa Canario waxay ku fiicnaan doontaa aqalka dhexdiisa haddii si ku filan loo jimicsado. Iyagu gudaha waxoogaa kama hawlgalaan waxayna ku fiicnaan doonaan ugu yaraan deyr dhexdhexaad ah.
isku darka doberman iyo chihuahua
Noocan ayaa loo baahan yahay in lagu qaato a maalin kasta, socod dheer . Ha u oggolaan eeygan inuu ku baxo horjoogaha hortiisa inta uu socodka ku maqanyahay. Hogaamiyaha baakadka ayaa marka hore taga oo Presa waa inuu fahmaa in bini'aadamka oo dhami ay isaga ka sareeyaan sida ay u kala horeeyaan. Presa way horumari doontaa hadii shaqo la siiyo.
coyotes karaa saaxiibkiis eeyaha
Qiyaastii 7 ilaa 9 eey
Koodhka gaaban, ee adag waa fududahay in la xajiyo. Ku caday burush adag oo tirtir oo ku tirtir xoogaa shukumaan ah ama jahwareer dhammaystiran dhalaalka. Maydho ama shaambo qalalan markay lagama maarmaan noqoto. Noocani waa celcelis daadiya.
Faracii Presa Canario ayaa laga yaabaa inuu hadda ka mid yahay bakhtiyey Bardino Majero oo aan caqli lahayn oo asal ahaan ka soo jeeda ayaa la tallaabay Mastiff Ingiriis ah oo laga soo dhoofiyey. Waxaa lagu horumariyey jasiiradaha Canary 1800 meeyadii sidii ey ey utility utility. Jasiiradda Canary waxaa loogu magac daray eeyga. Waxay ahayd eey soo qabata oo soo qabta lo 'aan amar lahayn iyo ugaadha duurjoogta ah. Waxaa loo adeegsaday in xoolaha laga ilaaliyo ugaarsadayaasha duurjoogta ah iyo dadka. Markii dambe waxaa loo adeegsaday in muddo ah sidii dagaalyahan eey ah oo ay beeraleydu caajisteen madadaalo. Dagaalkii eeyaha markii dambe waa la mamnuucay oo eeyo kale ayaa caan ka noqday. Laakiin waxaa jiray qaar ka mid ah beeralayda oo sii waday inay ilaashadaan oo ay u shaqeeyaan sida eyga beeraha.
AKC / FSS = Adeegga Kaydka Aasaasiga ee Naadiga Mareykanka®Barnaamijka
Bruno UKC waxay diiwaangashan tahay Perro De Presa Canario. Eeg inbadan oo Bruno
Ares waa daahir Presa Canario qiyaastii 1 sano jir
Ares waa nooca Presa Canario ee saafiga ah qiyaastii 5 bilood jir
Drago de Dona Aurora oo 3 sano jir ah, culeyskiisuna yahay 116 rodol
Topatacaya de Rey Gladiador the Dogo Canario as a 2-bilood jir ah eey, sawir qadarin leh Rey Gladiador
3.5-bilood jir brindle Dogo Canario puppy, sawir iska leh Rey Gladiador
Eeg tusaalooyin badan oo Presa Canario ah
Sawirada Presa Canario 1
Sawirada Presa Canario 2
fland bulldog brussels griffon isku dhafan
bulldog american ah oo lagu qasay chihuahua